भोलि कार्तिक ९ गते आईतबार को राशिफल हेर्नुहोस्
October 24, 2020 1448
मेषः– परिस्थितिलाई वुझेर मात्र काम’मा हात हाल्नु होला । कार्य क्षमतामा वृद्धि हुनेछ । व्यापार व्यवसायमा प्र’गतिका सम्भावना देखिने छन् । गीत संगितमा अभि’रुची बढ्नेछ । मान्य जनको प्रेर’णा,सहयोग सहानुभूति मिल्नेछ । मनलाई नियन्त्रण गरि अगाडि बढ्नु होला । सक्रि’यताबाट मात्र गन्तव्यमा पुगिनेछ ।
वृषः– काममा सहजीकरण गरि दिने कोहि हुने छैन । उपल’ब्धि विहिन काममा समय बढि खर्च हुनेछ । परोपकारले पेट भरिने छैन । व्यापार व्यवसायबाट उचित प्रति’फल मिल्ने छैन । आत्म विश्वासको कमि देखिन्छ । यात्राको सम्भावना देखिन्छ । आफन्तले पराईको व्यव’हार गर्ने छन् । तर मध्यान्हबाट कामले गति लिनेछ ।
मिथुनः– उपलब्धिको संरक्षण गर्न सकिने छैन । आ’फन्त सँगको विश्वास र भरोसा टुट्नेछ । लगनाी अनुसारको व्यापार व्यवसायबाट उपलब्धि हात लाग्ने छैन । अन्तिम चरण’मा पुगेका काम पनि रोकिने छन् । खानपान नमिल्दा स्वास्थ्यमा समस्या आउनेछ । लेनदेन का’रोवार विग्रिन सक्छ । नयाँ क्षेत्रमा लगानी नबढाउनु होला ।
कर्कटः– समय र धनको सदुप’योग गरेर अगाडि बढ्नु होला । स्वतन्त्र प्रकृतिका व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ । नोकरी तथा राजनीतिमा नयाँ अवसरको खोजी हुनेछ । अध्या’त्मिक भन्दा भौतिक सम्पतिको लालसा बढ्नेछ । मनमा सुख,शान्ति थोरै मिल्नेछ । गीत,संगित तथा कला सहित्यमा अभिरुची बढ्नेछ । मध्यान्हबाट काम’मा अवरोध आउनेछ ।
सिंहः– समय सुधारोन्मुख छ । तिव्र इच्छा शक्ति’को खाचो देखिन्छ । लगनशिलता भङ्ग गरेर काम नगर्नु होला । काममा विरोधीको बक्रदृष्टि पर्नेछ । पढाई लेखा’ईमा प्रगति कम हुनेछ । मिलेर काम गर्दा विवाद बढि हुनेछ । प्रतिश्पर्धा गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ । धार्मिक आस्था र विश्वास बढ्नेछ । कुरा भन्दा काम’मा जोड दिनुहोला ।
कन्याः–अस्थिरताले अनिष्ट निम्त्याउने हुदा मन’लाई नियन्त्रण गरि कर्म क्षेत्रमा जानु होला । कहि,कतै र कोहिबाट इज्जत प्रतिष्ठामा आच आउने काम हुनसक्छ । राज’नीति औजार प्रयोग गरेर दुःख दिन खोज्नेहरु आफै त्यो पासोमा पर्ने छन् । व्यापार व्यवसा’यमा खासै प्रगति हुने देखिन्न । काम गर्र्न स्वास्थ्यले साथ कम दिनेछ ।
तुलाः– अनुकुल वाताव’रणमा काम गर्न पाईने छैन । प्रतिकुल परिस्थितिको सामना गनुृ पर्नेछ । आफ्नै कारण काम’मा ढिला सुस्ति हुनेछ । व्यापार व्यवसायबाट उचित लाभ लिन सकिने छैन । विपरित लिङ्गिबाट सहयोग मिल्नेछ । घरका समस्या समाधान गर्न गाह्रो गा’ह्रो हुनेछ । विचारको खडेरी पर्नेछ ।
वृश्चिकः– अरुलाई पनि विश्वास’मा लिएर काम गर्दा आफैलाई फाइदा हुनेछ । काम गर्दा साथी भाईको सहयोग मिल्नेछ । संघर्षबाट सफलताको शिखर चढिनेछ । परिश्रम’को अन्तिम परिणाम सुखद रहनेछ । कार्य क्षमतामा कुनै कमि आउने छैन । व्यापार व्यवसा&यबाट आम्दानी बढ्नेछ । शैक्षिक गतिविध अगाडि बढ्ने छन् ।
धनुः– दयाको भिख नमा’ग्नु होला उल्टो अपहेलित हुनु पर्नेछ । समस्याबाट टाढा नभागि अगाडि बढ्नु भयो भने मात्र मिशनमा पुग्न सक्नु हुनेछ । आर्थिक प्रलोभ’नमा परेर वा’ह्य व्यक्तिसँग कुनै आर्थिक कारोवार नगर्नु होला । स्पष्ट वोल्दा आफैलाई नोक्सना हुनेछ । व्या’पार व्यवसायमा सामान्य उतार चढाव आउनेछ ।
मकरः– उपलब्धि हासिल गर्न काममा स्था’यीत्व दिनुपर्ने देखिन्छ । जीवन साथीको सहयोग लिएर काम गर्दा थोरै फाइदा हुनेछ । काम गर्ने जोश जागर बढ्नेछ । धन लगा’नीमा धेरै जो’ड नदिनु होला । इच्छा र आकाँक्षा केहि पुरा हुनेछन् । मिलेर काम नगर्नु होला । भोज भ’तेरमा सहभागिताको लागि निमन्त्र’णा आउनेछ ।
कुम्भः– असहज स्थिति’को सृजना हुनेछ । काम गर्ने बातावरण खलबलिनेछ । खोक्रो आश्वा’सन पाईनेछ । चोटपट’कको भय देखिन्छ । काम गर्दा सुरक्षित विधि अप्नाउनु होला । आशा र भरोसा टुट्नेछ । अराजनैतिका व्यक्ति भेटि’ने छन् । आर्थिक कारोवारमा ध्यान दिनुहोला । मध्यान्हबाट समयमा सुधार आउनेछ । व्यापार व्यव’सायमा सुधार आउनेछ ।
मिनः– समयको मह’त्व वुझेर काम गर्नु होला उप’लब्धि राम्रै हात लाग्नेछ । प्रयास र प्रयत्नबाट धेरै काम बन्ने छन् । अरुको भरमा मात्रै काम नगर्नु होला । अध्य’यन कार्यमा भन्दा आर्थिक का’र्यमा बढि दखल हुनेछ । कामको विचमा विचार परि’वर्तन नगर्नु होला । व्यापार व्यव’सायबाट आम्दानी बढ्नेछ । मध्यान्हबाट समय प्रतिकुल हुनेछ
Prevभोलि कार्तिक ८ गते शनिबारको राशिफल हेर्नुहोस्
Nextहोसियार ! छिटो सवा’री चलाए कार’वाहीमा परिएला….
नेपालमा ७२ प्रतिशत नेपालीलाई कोरोना विरु’द्धको खो’प दिने तयारी…